မေ့ဆေးဆရာဝန် Assistant ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ - JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / Uncategorized / မေ့ဆေးဆရာဝန် Assistant ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
မေ့ဆေးဆရာဝန် Assistant ယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်နမူနာပြီးတော့အခန်းကဏ္ဍ
ယာကုပ် ဇွန်လ 28, 2016 Uncategorized မှတ်ချက် Leave 778 views
ခွဲစိတ်ခြင်းနှင့် nonsurgical နည်းစနစ်နှင့်စပ်လျဉ်းမေ့ဆေး၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်း၌မေ့ဆေး Assist. လူနာဂုဏ်သတင်းကိုစောင့်ရှောက်ခွဲစိတ်ကုသမှုကာလအတွင်းလူနာကြောင်းကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ထောက်ပံ့.
operating ဖြစ်ကြောင်းအခန်းထဲမှာထုတ်ကုန်များ၏ option ကိုစစ်ကြော, ဆေးဝါးများ, နှင့်ဓာတ်ငွေ့.
သင်တန်းများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်, နှီးနှောဖလှယ်ပွဲ, မေ့ဆေးဗေဒအတွက်တီထွင်မှု၏ updated စောင့်ရှောက်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်ရေးရာသို့မဟုတ်.
လေကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှု tracheal intubation သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုအပါအဝင်ခွဲစိတ်ကုသမှု Give.
cardiopulmonary resuscitation ပေးခြင်းအားဖြင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှရင်တွင်းစကား (CPR), အခြေခံနှလုံးအသက်တာကိုထောက်ခံကြောင်း (BLS), အဆင့်မြင့်နှလုံး lifesupport (ACLS က), သို့မဟုတ်ကလေးအထူးကုအဆင့်မြင့်ဘဝ-ထောက်ခံမှု (မိတျဆှ).
clientsA ကြိုတင်စုဆောင်းသတင်းပို့- ကျန်းမာရေးအတိတ်.
တင်သွင်း-မေ့ဆေးကာလအတွင်း individualsI ကြိုတင်မဲစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သတင်းပို့.
electrocardiogram အပါအဝင်လူများ၏စောင့်ကြည့်မှုအတွက်မေ့ဆေးကိုလမ်းညွှန် (EKG), တိုက်ရိုက်သွေးလွှတ်ကြောဖိအား, ဗဟိုသွေးပြန်ကြောဖိအား, သွေးလွှတ်ကြောသည်အသွေးဓာတ်ငွေ့, hematocrit, အပူသို့မဟုတ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖော်ပြချက်, အသက်ရှူ, ခန္ဓာကိုယ်ပေါင်ချိန်ခြင်းနှင့်နှလုံး-မှုနှုန်း.
အချင်းချင်းအပြန်အလှန်သို့မဟုတ်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းလေဝင်လေထွက် -arterial cardio ထောက်ခံမှုပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးချဖို့ကဤကုသမှုအပါအဝင်ခေတ်မီဆန်းပြားဘဝ-ထောက်ခံမှုမဟာဗျူဟာ၏ထောက်ပံ့ရေးအတွက် Assist.
ထိုကဲ့သို့သောဥပမာအဖြစ်ထုံဆေးနည်းလမ်းများလုပ်နေတာခုနှစ်တွင်ကျောရိုးနှင့် epidural ကုသမေ့ဆေးကူညီ,.
ထိုကဲ့သို့သောအဆုတ်သွေးလွှတ်ကြော catheterization ရောင်စဉ်တန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့်အလားအလာအဖြစ်ခြေရာခံနည်းစနစ်၏ထိရောက်သောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူထွက်ကိုကူညီပါ.
ခန္ဓာကိုယ် Render, အသွေးတော်ကုန်ပစ္စည်းများ, သို့မဟုတ်သစ္စာစောင့်သိအရည်များ.
ထုံဆေး Dispense , adjuvant, တစ်ဦးမေ့ဆေးဆရာဝန်များ၏သင်တန်းအောက်သို့မဟုတ်ပစ္စည်းကိရိယာများဆေး.
အခြားလူများပြောနေကြသည်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-တင်ပြတစ်ခုလုံးကိုအသိအမြင်, built ခံရသည့်အမှုအရာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အချိန်ရှိခြင်း, သင့်လျော်သောအဖြစ်ကိုအံ့ဩကိစ္စများ, မှားအချိန်များတွင် mesmerizing မဟုတ်.
critical အတွေးအခေါ်-အလုပ်သမားတရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းနှင့်ဆင်ခြင်ခြင်းအားနည်းချက်များကိုနှင့်ချဉ်းကပ်၏အခွက်အသိအမှတ်ပြုရန်, ပြဿနာများမှစိတ်ကူးများသို့မဟုတ်အခြားအဖြေကို.
လတ်ဆတ်တဲ့ပစ္စည်းများလေ့လာနေသို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်တဲ့အခါမှာညာဘက်အခွအေနအဘို့မဟာဗျူဟာ-အသုံးချပြီးနှင့်ကောက်နေ teachingORtutorial အလေ့အကျင့်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များသင်ယူခြင်း.
ကိုယ့်ကိုယ်ကို၏ / အကဲဖြတ်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုစစ်ဆေးစစ်ဆေးနေ, အပိုဆောင်းပုဂ္ဂိုလ်များ, သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းများမှန်ကန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုစဉ်းစားသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုများဖန်တီးရန်.
သူတို့လုပျအဖြစ်သူတို့တုံ့ပြန်အဘယ်ကြောင့်လူမှုရေးအမြင်-သိ othersI သဘောထားတွေနဲ့ comprehension.
othersI အပြုအမူ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ Dexter-ပြောင်းလဲလုပ်ရပ်များ.
ကုမ္ပဏီအရှေ့တိုင်းဆန်-Active တစ်ဦးချင်းစီကို enable နည်းလမ်းများရှာကြံ.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်-ဖော်ထုတ်ခြင်းရှုပ်ထွေးဒုက္ခနှင့်ဆက်နွယ်နေသတင်းအချက်အလက် critiquing ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်အခြားနည်းလမ်းထုတ်လုပ်ရန်နှင့်ကုစားအကောင်အထည်ဖော်ရန်.
စစ်ဆင်ရေးအားသုံးသပ်ခြင်း-စစ်ဆေးရေးကို item သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုတစ်ဦး layout ကိုအောင်.
တစ်ဦးချင်းစီလိုကမ်းလှမ်းရန်အင်ဂျင်နီယာဒီဇိုင်း-align လုပ်ဖို့ tools များသို့မဟုတ်ချမှတ်ခြင်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာ.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ဆုံးဖြတ် tools များနှင့်တာဝန်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့မျိုး.
အရစ်ကျ-Installing ဝါယာကြိုး, ထုတ်ကုန်, tools တွေ, သို့မဟုတ် packages များယေဘုယျအားဖြင့်လိုအပ်ချက်များဖြည့်ဆည်းရန်.
စစ်ဆင်ရေးခြေရာကောက်ကြည့်နိုင်သော dial ညွှန်းကိန်း, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်အချက်ပြအချက်ပြမှုများစက်မှန်ကန်စွာဖျော်ဖြေနေသည်သေချာစေရန်.
systems တစ်ဦးဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ-ဆုံးဖြတ်နှင့်မည်သို့စစ်ဆင်ရေးပြောင်းလဲမှုများ, ဝေဒနာတွေက, နှင့်လည်းပတ်ဝန်းကျင်သို့သက်ရောက်မှုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်.
ဒေါ်လာ task ကိုပြည့်စုံရှိသည်ဖို့မည်သို့အသုံးချမည်ကိုငွေ-ကိုစူးစမ်း၏ကြီးကြပ်မှု, ဤကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. အရောင်း.
ကုန်ပစ္စည်းပစ္စည်းကိရိယာများ၏သင့်လျော်ပါသည်ဆီသို့ဦးတည်နည်းလမ်းများ-ရယူနှင့်မြင်နေ၏ကြီးကြပ်မှု, အဆောက်အ, နှင့်ထုတ်ကုန်အချို့အလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-လှုံ့ဆျောမှု၏ကြီးကြပ်မှု, အဆောက်အဦး, သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ directing, အလုပ်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားသွား.
ဇွဲ – 88.41%
အာဏာ – 91.87%
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – 93.33%
အခြားသူများနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန် – 94.13%
ယဉ်ကျေးမှုနေရာချထားခြင်း – 89.13%
မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း – 94.18%
စိတ်ဖိစီးမှု Threshold – 98.40%
မှီခို – 96.40%
အနက်ပေါ်အာရုံစူးစိုက် – 99.60%
ကျင့်ဝတ် – 97.00%
လွတ်လပ်ခြင်း – 91.25%
တိုးတက်ရေး – 87.17%
analytical အတွေးအခေါ် – 90.63%